Amatafula wokuphindaphinda ▷ I-Descub️ Thola ku-inthanethi ▷ ➡️
TUkhuluma ngokuphindaphindeka. Kungaba njalo funda lula kunalokho ucabanga. Konke kuyindaba yokubazi, ukuphinda futhi ukubamba ngekhanda futhi bazohlala nawe impilo yakho yonke. Kwenze!
Iphutha: ukubuka kungenzeka kungabi khona d0241853ho
La Itafula lokuphindaphinda kuyinto ozoyisebenzisa kaningi empilweni yakho yonke. Awusoze wakhohlwa uma ufunda usemncane. Uma siphinda njalo amatafula ngamunye, emahoreni ambalwa uzokwazi ukuqinisekisa ukuthi uzazi kahle zonke izinombolo ukuze uziphindaphinde.
Ingabe uyafunda amatafula? Sincoma i-athikili yethu: kanjani ukufunda amatafula ukubuyabuyelela. Khumbula lokho amatafula wokubuyabuyelela kusuka ku-1 kuye ku-10 zibalulekile ezibalweni. Uma ungazazi kahle ngokushesha, uzoba nezinkinga ngokuzayo uma kukhulunywa ngokwenza izibalo ezilula. Kodwa ungethuki! Siyakuqinisekisa ukuthi kulula kunalokho ucabanga. Njengesibonelo, kuyathakazelisa ukuthi uyakuqonda ukuthi u-3 x 4 uneminyaka engu-12. Lokhu kusho ukuthi u-3 uyaphindwa amahlandla ama-4, singasho futhi ukuthi u-4 uphindwe ama-3, kuyefana.
Yize kuyathakazelisa qonda ukuthi ukuphindaphindeka kusebenza kanjaniEmpilweni yakho yangasese, kuzoba yimemori yakho ezosho umphumela wokuphindaphindwa ngakunye khona manjalo.
1 Amatafula wokubuyabuyelela kusuka ku-1 kuye ku-10
2 Ayini amatafula okuphindaphinda?
2.1 Yiziphi izinzuzo ezalethwa yithebula lokuphindaphinda?
3 Uwafunda kanjani amatafula wokubuyabuyelela?
4 Ithebula eli-1
5 Ithebula eli-2
6 Ithebula eli-3
7 Ithebula eli-4
8 Ithebula eli-5
9 Ithebula eli-6
10 Ithebula eli-7
11 Ithebula eli-8
12 Ithebula eli-9
13 Ithebula eli-10
Amatafula wokubuyabuyelela kusuka ku-1 kuye ku-10
I-Las amatafula wokuphindaphinda abalulekile, ezimpilweni zethu zonke sizothola izimo lapho kumele sizazi futhi siziphathe kahle ngokukhulu ukukhululeka. Izimo ezivame kakhulu lapho singabathola khona kungaba:
• Ukuthenga amathikithi ayi-10 ngomcimbi womndeni wakho wonke futhi udinga ukwazi ngokushesha intengo yakho konke. Ithuba elilodwa kungaba ukwengeza konke okokufaka ngakunye, okunye okungenzeka kube ukusebenzisa la 1 ithebula0 lokho kungasinika ikhambi ngokushesha.
• Esinye isimo kungaba ukwazi sizodinga uphethiloli ongakanani ukufika endaweni, uma sazi ukuthi imoto yethu ichitha ini emakhilomitheni ama-5. Kulokhu singasebenzisa la 5 ithebula njengenketho engcono kakhulu.
• saber zingaki izinto ezisemabhokisini amaningi uma sazi ukuthi mangaki amayunithi akuyo ngayinye yazo.
• Yazi intengo ephelele yenqwaba yezinto uma sazi ukuthi inkulu kangakanani.
• Yazi inani lamaqanda ayishumi nambili uma sazi ukuthi elinye lawo libaluleke kangakanani.
• Uma unenkampani futhi unabasebenzi abangama-2000 lapho wonke umuntu ezothola umholo ofanayo, khona-ke ukuphindaphindeka okulula kungakusiza wazi ukuthi kufanele ukhokhe malini kubo bonke abasebenzi bakho abasenkampanini yakho. Yimisebenzi ejwayelekile kakhulu.
Ngakho konke lokhu nokuningi kubalulekile ukwazi ngokuphelele itafula lokuphindaphindaFuthi, kuhle ukwazi izinzuzo zokutadisha ithebula lokuphindaphinda. Njengoba sibona, izimo lapho siya khona badinga itafula lokuphindaphinda livame kakhulu futhi liyahlukahluka, futhi yingakho ukubazi kahle nokubazi ngokujulile cishe kuyisibopho ezimpilweni zethu.
Ayini amatafula okuphindaphinda?
Ukusungulwa kwe- amatafula wokubuyabuyelela kubangelwa isazi sefilosofi nesazi sezibalo Ama-Pythagoras. Ngobuhlakani obukhulu, wakwazi ukubona ngeso lengqondo le misebenzi yezibalo, yize kamuva kwaba yisikole sasePythagoras esabenza baphumelela.
Amatafula wokuphindaphinda babesesikhathini sabo inguquko yangempela, ngoba ngenxa yabo imisebenzi emikhulu yezibalo ibingenziwa ngaphandle kokufaka izibalo eziningi kaningi.
Kwaphela iminyaka eminingi, zonke izinhlobo zamatafula nokulandelana kwaklanywa, amanye amatafula ayenamanani ama-3 kusuka ku-0 kuye ku-999, kepha awazange abe nempumelelo yamatafula ayisisekelo 0 kuya ku-10.
e 1642 UBlaise Pascal wasungula umshini wokubala othomathikhi okwakuyirubrikhi yalokhu kusebenza kwezibalo.
Ithebula lokuqala lokuphindaphinda, lalinetafula laseCartesian (noma Itafula lasePythagoras ) okubandakanya ukuhlanganisa ibhokisi ngalinye nelinye.
Yiziphi izinzuzo ezalethwa yithebula lokuphindaphinda?
• Abathengisi babengenza imisebenzi yabo yokuthenga nokuthengisa ngokushesha okukhulu.
• Osomnotho nabaqoqi bentela bangaleso sikhathi sebengakwazi ukwenza imisebenzi emikhulu ngesikhathi esifushane.
• Izakhamizi zingenza imisebenzi eyinkimbinkimbi ngaphambili ebithatha isikhathi eside.
Njengoba sibona, izibalo futhi ikakhulukazi amatafula wokubuyabuyelela, ekuqaleni bavele baqala ukukhiqiza okokuqala kwabo izinzuzo emphakathini. Ngaleso sikhathi, ukuba namathuluzi awusizo anjalo kwakuyisipho sangempela isayensi eyabalethela sona. Namuhla, bekungacabangeki ukuthi ukwazi ukuhlala ngaphandle kwamatafula wokuphindaphindeka, ngoba izigidi zemisebenzi zenziwa nsuku zonke lapho kudingeka khona amatafula.
Uwafunda kanjani amatafula wokubuyabuyelela?
Uzobazi konke ngehora elilodwa!. Uma uzibuza kanjani ukufunda amatafula ukubuyabuyelela, sinezindaba ezinhle, kulula kakhulu ngeqhinga ! Ubuchopho bunakho izinhlobo ezimbili zememori: isikhathi esifushane nesikhathi eside, lobu buqili buzokuvumela ukuthi uzifunde ngokushesha okukhulu futhi buzokugcina unaphakade. Sizolandela lezi zinyathelo ezizokwenza amatafula abe lula kakhulu.
• Isinyathelo sokuqala. Ake sithathe isibonelo Itafula lezikhathi eziyi-7. Futhi sizoyifunda yonke kanye. Ungakhathazeki uma ungakubambi ngekhanda konke, okokuqala lokhu kuvamile, ake sifunde nje.
• Isinyathelo sesibili. Sizohlanganisa zonke izixazululo ngesiqeshana sephepha, ngaphandle kokumboza ukuphindaphindeka, sihlanganisa izixazululo ezinjengalezi kuphela:
• Isinyathelo sesithathu. Sizoqala ekuqaleni futhi sizozama ukwazi ukuthi ingakanani i-7 × 1, sithi umphumela ngokuzwakalayo bese wehlisa iphepha ukulihlola, uma uphumelele, qhubeka nokuphindaphindeka okulandelayo okungu-7 × 2, uma wehlulekile kufanele umboze zonke izixazululo bese ubuyela ekuqaleni.
• Isinyathelo sesine. Uma ushaya u-7 × 2, bese uqhubeka ukwehlisa iphepha ngakunye kuze kube sekupheleni, uma uphuthelwa kufanele uhlanganise wonke futhi uqale ekuqaleni. Futhi ngakho ngawo wonke amatafula.
Lolu hlelo lusebenzisa inkumbulo yakho ukukhulisa ukunakwa. Ngale ndlela, ubuchopho bakho buzokwenza konke okusemandleni abo ukwazi ithebula lokuphindaphinda ukuze lingadingi ukuqala ekuqaleni ngethebula ngalinye. Yingakho lolu hlelo lungenye yalezi esizibona zisebenza kakhulu. Ngasikhathi sinye sizobe siphinda amatafula kaninginingi, ngakho-ke isifundo sizophelela ngokwengeziwe.
Inkumbulo yesikhathi eside ingenye ephumelela kakhulu. Okuvezwa yilokuzivocavoca ukuthi ubuchopho bakho bunake kakhulu, ngoba kuyazi ukuthi uma wehluleka kuzofanele ubuyele ekuqaleni futhi. Lokhu kufanele ukwenze ngamatafula wokuphindaphinda ayi-10, futhi uphinde le ndlela kaninginingi Siqinisekisa ukuthi ngehora eli-1 uzokwazi konke!
Imininingwane ethakazelisayo mayelana amatafula wokubuyabuyelela :
• Amatafula wokuphindaphinda ayimisebenzi elula yezibalo okubandakanya ukufaka inombolo izikhathi eziningi, ngokwesibonelo 7 × 3 = 21 (lokhu kusho ukuthi 7 + 7 + 7 = 21). Yimisebenzi elula kakhulu kepha ngasikhathi sinye ibaluleke kakhulu empilweni, ngoba uzoyisebenzisa kakhulu.
• Ukubaluleka kokwazi amatafula okuphindaphinda kubalulekile, ezinye izibonelo zokusetshenziswa kungaba: uma ulamula ubiza amadola ama-5 bese ngithenga ulamula o-4, ngabe konke kuzongibiza malini? Ngokusebenza kwezibalo 5 x 4 = 20, siyazi ukuthi amadola ama-5 x ama-4 ulamula ngama-dollar angama-20. Uzokwenza lo msebenzi wezibalo izikhathi eziyizinkulungwane kukho konke ukuphila kwakho.
• Kumele sibaphathe kahle. Kubalulekile ukubazi kahle kakhulu ukuze sikwazi ukuthola isisombululo sokuphindaphinda ngakunye khona manjalo, lokhu kuzosivumela ukuthi songe isikhathi esiningi ngezibalo ezihlobene.
• Kunamaqhinga amaningi ukwazi amatafula wokuphindaphinda, sincoma i-athikili kanjani ukufunda amatafula ukubuyabuyelela, kodwa futhi sichaza eminye imininingwane, isibonelo: uma sazi ukuthi u-3 × 4 = 12 ungakanani, sizokwazi nokuthi u-4 × 3 = 12 ungakanani, khumbula ukuthi i-oda alisithinti isixazululo, ngale ndlela u-7 × 3 = 21 no-3 × 7 = 21. Leli qhinga lizokusiza ukuthi ulisebenzise ekusebenzeni okuningi.
• Indlela engcono kakhulu futhi ephumelelayo yokufunda amatafula wokubuyabuyelela, iqukethe ukuphindaphinda itafula ngalinye kaninginingi, lokhu kuzokwenza ukuthi ubakhumbule kalula futhi impilo yabo yonke.
Manje njengoba uwazi amatafula, isikhathi sesifikile zifunde impilo yakho yonke, kule webhusayithi sikunikeza amaqhinga wememori azokusiza ungalokothi uwakhohlwe futhi ube nempendulo esheshayo ngaso sonke isikhathi lapho uwadinga.
Khumbula lokho ukungaguquguquki kuyisihluthulelo sempumelelo, yize zingabonakala zinzima, amatafula wokuphindaphinda adinga isikhathi esincane kakhulu sokufunda unomphela, kumane kuyindaba yokuphindaphinda nokuphinda ngayinye yazo, siqinisekile ukuthi ntambama eyodwa uzokwazi ukufeza inhloso oyibhale enkumbulweni yakho impilo yakho yonke.